Umhla My Pet » Ngaba Kukho Into Njengoko umlo Good kulwalamano?
ukubuyekezwa: Nov. 21 2020 | 4 min ukufunda
Nangona iimpikiswano ingqalelo okulungileyo ubudlelwane, kukho ezifana into umlo omhle kubudlelwane? Ewe ilapho, unbelievably. Ukulwa inceda ubudlelwane ukuze ukhule isibini ukwazi na ngakumbi. Ekubeni yinto kunako ukuphetshwa, izibini kufuneka bafunde indlela yokulwa ngobulungisa.
Ukwazi ukuba uzilwe njani ngobulungisa ukuba kakhulu kubaluleke ngakumbi kunokwazi kutheni kwavuka umlo kwi ndawo yokuqala, nangona besilwa ezincinane zifanele ukuba. Ukuthatha ixesha xa elinye iqabane uziva ngathi ziza kulahlekelwa nto kubaluleke kakhulu, kuba akakwenzi oko kunokukhokelela abasabela ezimandundu ukudlisa nayayisenokuthintelwa.
Ukwengeza, kubalulekile ukwenza elinye iqabane bazive ukuba ziyeviwa. Musa ukuba imatshisi bekhwaza, njengoko akunakukunceda ukusombulula nantoni, njengoko engcolileyo njengoko ingasoloko.
Xa umlo kunye neqabane likabani, Siyakuhlala sifuna ukusombulula umlo ngoxolo, kunokuba alwe ukuphumelela. nokuba, ekubeni oku lula wathi kunokuba kwenziwe, kukho isibini lwemithetho, apho, xa ilandelwa, ndingekawuboni wenze ukuba umlo kuyingenelo.
Owabambayo umsindo akuyi kusebenza; kunokuba wabeka umsindo wakho ngaphesheya ukuba iqabane lakho
Umsindo yimvakalelo jikelele, leyo ethetha intlungu, usizi, iintloni yaye nkqu nokuzisola. Oku kunokubangelwa sisiganeko ukuba kwenzeke ixesha elide eyadlulayo okanye isiganeko yangoku. nokuba, Abantu abaninzi abayazi indlela ukujongana umsindo.
Umsindo kufuneka lubonwe ngokwesityhilelo, imvakalelo enceda iqabane likabani ukuza nezisombululo ingxaki. ngoko ke, ngokunikela ingqalelo umsindo kuya ukunceda ekujonganeni unobangela ingxoxo ngokunjalo isisombululo sayo ngokulula kancinane kakhulu.
Ndishumayela ngesibetho eliphantsi akayi kwenza omnye liqhawe
Iimpikiswano na iindlela, ukuba bayinyuse ubuthathaka iqabane lakho, neemfihlo okanye okudlulileyo ayichithe. Oku ngesibetho eliphantsi kwaye ibonisa ukuba omnye mhlawumbi lingakhuselekanga kakhulu eluswini yabo, ngoko ke, uvakalelwa imfuneko ukuhlasela abalingane babo ukuze zizizwe ngcono, okanye legwala kufuneka silinde mpikiswano kwi ukuphelisa ulwalamano.
Izenzo bubugwala Ezo kwenziwa nge ngeenjongo zokwenzakalisa buhlungu ngakumbi ukuya kwelinye iqabane kufuneka babalekwe zonke iindleko. Kunokuba nomntu obetha ngezantsi ibhanti, neqabane kufuneka bezolile umoya into buhlungu kuye okanye. Yiyo ke le nto yenza umntu liqhawe.
Musa ukulibala ukuvakalisa inkxalabo, ukuncoma, ukuxabisa, uvelwano
Nabani na ukuba umlo kunye neqabane ngaphandle ukucacisa nayiphi na kwezi zingentla akenzanga nto kunene. Ezi mvakalelo ebalulekileyo kakhulu, ingakumbi kubantu kulwalamano, hlobo kalisa la iimvakalelo kuya kuqinisekisa ukuba izibini zizakuba imilo elungileyo.
Bomntu akuquki ebangela intlungu kwiqabane elinye kuba bayazi ukuba iqabane unelungelo lokufumana impatho enobulungisa. Ukuvelana nomntu, ubani kujonga imeko ngokwembono omnye umntu.
Musa ngoluya, khala, kunye sisithuko
Ingaba umntu wakha ngokwakhe kwimeko apho na kunceda kodwa ndithi zonke izinto engalunganga xa nomsindo, kodwa siyazi ukuba kuphosakele, kodwa nomsindo kakhulu ukuba ucinge? Ukulwa ntoni ukuba nabani, ingakumbi xa sisilwa ngokungenabulungisa.
Kubalulekile ukuthatha ixesha lakho phambi kokuba uphendule umsindo. Musa ukungxama kakhulu ukuthetha amazwi kwakuza du ukuba akanakuze ziyakohluthwa okanye zirhoxiswe, noba kwenzekani. Endigxolisa nokumemeza ubani imiphunga yaye iqabane elinye kusisithuko Kukhokelela kuphela ukulahlekelwa ilizwi enye, ivusa amatakane kwaye mhlawumbi eseleyo ebumelwaneni.
Musa alwe zinjongo ukuphumelela okanye ukuba omnye ngasekunene
Xa sisilwa neqabane enye, musani ukuzama nzima ukuba abe ophumeleleyo, njengoko iqabane ngokwenza oku kunokuba nje omnye phezu engalunganga. Ukuzama kunzima kangaka ukuba ekunene nje aye iimvakalelo abo ndingafaneleki, uhlobo abantu asifuni ukuba iphosakele.
Yintoni ukusetyenziswa umlo, kodwa walahlekelwa iqabane likabani? Ngaba sancedakala phofu? Ubani kufuneka njalo ndandixakeke kwi umlo ukuba bayasilela ukubona ukuba yimalini amaqabane abo bachatshazelwa. Kuthatha kakhulu umgudu lokurhoxisa kancinane nokuvavanya imeko, ukubona indlela ubani negalelo ingxabano.
Musa ukuzama ukunika amadlala ngendlela eyakhayo, akusayi kusebenza!
xa sisilwa, musani ukugxeka omnye iqabane, ucinga ukuba kuyinto inceda kuba engadli. Nabani esizibandakanya alwe ngokuqhelekileyo nomsindo kunene, kwaye nayiphi nokugxekwa enikwe kule ngongoma lwenzelwe ukuba ziphumeze intlungu. Into kuphela oku iyaphumelela kukwenza iqabane likabani bazive ngathi benza into esingaxolelekiyo kwaye nanto.
kunokuba, uyacebiswa ngokukhalaza kwelinye iqabane ngokuxelela oko umntu angathanda ukubona kwixesha elizayo.
Ngapha koko kuthiwa kwaye kwenziwa, amakhonkco enye nto iqinisekile. Kukho loo nto ngokufanelekileyo ukulwa, leyo ibaluleke kakhulu kubantu kulwalamano. Ubani kufuneka bafunde kwiimpazamo zabo ukuqonda nje kuphela into ukuze kwenziwe ukuqala umlo, kodwa yintoni abanokuyenza ukwenza ngcono kwixesha elizayo. Nabani na unako ukuyifunda izakhono elungileyo nefanelekileyo ngquzulwano qiniseka ukuba nolwalamano elide kakhulu kwaye ndiyavuya.